दुई दिने बाख्रा पालन तालिम सम्पन्न - Janakpur Today
in कृषि समाचार, स्थानीय समाचार
जनकपुरधाम , असार २४ गते । धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका २० स्थित देवपुरा रुपैठामा दुई दिने ब्यवसायिक बाख्रा पालन तालिम सोमबार सम्पन्न भएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाको सहयोग र श्री कालेश्वरनाथ कृषि सहकारी संस्थाको आयोजनामा तालिम भएको हो ।
तालिममा देवपुरा रुपैठाका ४ वटा समुहको २५ जना गरि जम्मा १०० जना महिलाको सहभागिता रहेको सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रामबाबु साहले जानकारी दिए । तालिममा बाख्राका जात, खोर व्यवस्थापन, आहारा व्यवस्थापन तथा बाख्रामा लाग्ने प्रमुख रोगका बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।तालिममा भेटनरी अस्पताल तथा पशु विग केन्द्र डा. शम्भु साह, पशु सेवा तालिम केन्द्रको उमेश प्रसाद साह , पशुपन्छी निर्देशनालयका पशु चिकित्सक बरुण कुमार मालिक र सन्तोष कुमार कर्णले सहजीकरण गरेका थिए ।
उक्त तालिमको पहिलो दिन उद्घाटन समारोहको अध्यक्षता जनकपुर उपमहानगरपालिका – २० का वडा अध्यक्ष भोगेन्द्र झाले गरेको थियो । त्यस्तै , प्रमुख अतिथिमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर लाल किशोर साह ,विशिष्ट अतिथिमा भेटनरी अस्पताल तथा पशु विग केन्द्र डा। शम्भु साह, वरिष्ठ इन्जीनियर बिरेन्द्र यादव , इलका प्रहरी कार्यलय फुलगमाको प.स.नि. शिब शंकर सहनी रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा स्थानीय सुरेश कुमार झा , वडा संचिव अनिल कुमार मिश्र , शिला कान्त झा, इन्द्रकान्त झा लगायतका व्यक्तिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
बिरगंज पथलैया राजमार्गमा बस अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा कन्टेक्टरको मृत्यु